Oslo egwu mwakpo: Onye uwe ojii merụrụ ahụ, onye mwakpo ngwa ọgụ gburu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway » Oslo egwu mwakpo: Onye uwe ojii merụrụ ahụ, onye mwakpo ngwa ọgụ gburu
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Oslo mma agha: uwe ojii merụrụ ahụ, wakporo gburu.
Amabeghị ihe ebumnobi onye a na-enyo enyo bụ, ọ bụ ezie na, dị ka ndị hụrụ anya, nwoke ahụ tiri mkpu "Allahu Akbar" (Chineke dị ukwuu) n'oge agha ahụ.
Onye na-enweghị uwe ji nnukwu mma wakporo ndị bi na Oslo ebe ọ na-eti "Allahu Akbar".
Onye mwakpo ahụ ya na onye uwe ojii nọ n'ụgbọala sere okwu ma onye uwe ojii ọzọ gbagburu.
A kọrọ na onye mwakpo ahụ jọgburu onwe ya sitere na mpaghara ndịda Russia nke Chechnya bịarutere Norway.
Oslo Onye uwe ojii merụrụ ahụ mgbe otu nwoke na-enweghị uwe elu, na-eji nnukwu mma wakporo ndị bi n'isi obodo Norway n'ehihie, tupu ndị ọrụ mmanye iwu agbagbuo ya.
Ihe onyonyo na foto ndị a na-ekesa n'ịntanetị na-egosi ụgbọ ala ndị mmanye iwu na-amachi onye na-enweghị uwe na isi obodo Norway ka ọ na-akpụ mma ma kwuo na ọ na-eyi ndị na-agafe agafe egwu.
Mgbe ụgbọ ala ndị uwe ojii tụpụrụ azụ azụ, onye mma ahụ jisiri ike laghachi n'ụkwụ ya wee mepee ụzọ ndị njem nke ụgbọ ala ndị uwe ojii. N'oge ahụ, ọ pụtara ka ya na onye uweojii nọ ọdụ na-ese okwu tupu otu onye ọrụ ibe ya ji egbe pụta, gbapụ onye ahụ wakporo.
Onye isi ọrụ na ndị uwe ojii Norway, Torgeir Brenden, kwuru na nwoke a na-akwado onwe ya ịdụ onye ọzọ mma mgbe ụgbọ ala ndị uwe ojii kụrụ ya. "Ọ na-achọ ịwakpo ndị mmadụ n'okporo ụzọ mgbe ndị uwe ojii bịara ma kwụsị ya," Brenden kwuru.
"Ndị mmadụ abụọ metụtara, ndị uwe ojii na-elekọtakwa ha ka ha nwere ike," onye isi ndị uwe ojii kwuru na-akọwaghị ya. Aghọtara na otu onye uwe ojii merụrụ ahụ mana ọ bụghị nke ukwuu. Brenden kwuru na ọ nweghị onye ọzọ merụrụ ahụ mana ọ gbakwụnyere "anyị nwere ike iche na o bu n'obi ibuso agha karịa."
Ndị uwe ojii kwadoro na ihe a mere n'ihe dịka elekere itoolu nke ụtụtụ na mpaghara Bislett Oslo. Ekwuputabeghị ọnọdụ onye a na-enyo enyo n'agbanyeghị na akụkọ ụfọdụ na-egosi na ọ nwụrụ n'ebe ahụ.
Dị ka mgbasa ozi Norwegian si kwuo, a mara onye mma ahụ ikpe na December 2020 maka ime mwakpo ọzọ ọkara ọtọ ọtọ na June 4, 2019. Onye mwakpo ahụ, bụ onye a kọrọ na-eti mkpu 'Allahu akbar' n'oge mwakpo 2019, tụrụ ndị uwe ojii akpata oyi ma jide ya. A mara ya ikpe nlekọta ahụike uche nke mmanye yana nra. Nwoke ahụ tolitere na mba Russia nke dị na Chechnya.
Mwakpo a na-abịa mgbe ihe mere na Cannes, France na Mọnde, mgbe otu nwoke ji mma meghere ọnụ ụzọ ụgbọ ala ndị uwe ojii ma wakpoo otu n'ime ndị ọrụ atọ nọ n'ime ya. Otu n'ime ndị uwe ojii ndị ọzọ gbagburu onye mma ahụ, bụ́ onye kọrọ na o kwuru ihe banyere “onye amụma ahụ.” Otu onye uwe ojii merụrụ ahụ.
N'ọnwa Ọktoba, otu onye Alakụba tụgharịrị gbuo mmadụ ise n'ịgba ụta n'obodo Kongsberg nke Norway.